NTULI AKA N'OKPURU EGWU SITE NA NATIONAL ASSEMBLY
Home https://isimbido.tv/casino-online-real-money-paypal-debit-declined/ casino online agent authorisation
NTULI AKA N’OKPURU EGWU SITE NA NATIONAL ASSEMBLY
Mmeghari ohuru a n’etiti President Muhammadu Buhari na nzuko ndi isi nke choputara ihe banyere ihe gbasara ego nwere ike imebi onu ogugu ndi isi ochichi. N’ụzọ doro anya, nkwenye mmebe iwu maka atụmatụ mmefu ego maka omume nke nhoputa afọ nke ọzọ site n’aka ndị Independent Electoral Commission (INEC) amaghị.
Onye so na Kọmitii Kwesịrị Ekwesị na Kọmitii na Onye Isi oche nke Kọmitii Banyere Banking, Insurance and Other Financial Institutions, Rafiu Ibrahim (APC, Kwara South), jụrụ ajụjụ onye isi oche ahụ.
Onye isi ochichi ahụ enweghi ike, n’oge a, rịọ ka ego ahụ maka isi ụlọ ọrụ isi obodo gbanwere maka ntuli aka, o kwuru. “Nke ahụ adịghị eme atụmatụ. Ebe ọ bụ na anyị nwere nchịkọta ikpeazụ, oge nchịkọta ọzọ a edozila. Ebe ọ bụ na anyị mere ntuli aka ikpeazụ, anyị amataworị mgbe anyị ga-eme nhoputa ndi ochichi ọzọ, dika iwu ntuli aka kwuru. Anyị maararịrị na a ga-amalite ọchịchị ọhụrụ na May 29, 2019. ”
Otu n’ime ndị omeiwu atọ nke ndị omeiwu a na-ahụ maka ndị omeiwu (PDP) si na Bayelsa State, na ọnọdụ enweghị aha, kwuru, sị: “Achọrọghị m ikwu okwu banyere ya. Onye ọ bụla maara na a ga-enwe ntuli aka n’ozuzu 2019, ma ha emeghị ndokwa maka nhoputa ndi ochichi na 2018. Ntak emi mmọ mîkenyeneke ndutịm nnọ enye? Ekwenyere m na ha ruru ihe. Ma anyị na-ele anya nke ọma. Maka ugbu a, Agaghị m achọ ikwu banyere ya. ”
N’ajụjụ ọnụ, onyeisi oche nke Kọmitii Kọmitii na Akaụntụ, Mathew Urhoghide (PDP, Edo South), kwuru na onyeisi oche enweghị nkwupụta ikpeazụ banyere ihe gbasara ego.
VIBE NKE TIWA SAVAGE BU NOMBA 1 NA YOUTUBE
Dị ka ya si kwuo, ọ bụ ezie na Buhari nwere ikike iwu kwadoro ịrịọ maka ya, Mgbakọ Mba ahụ ga-atụle ebe a ga-esi nyefe ego tupu ya akwado ya. “Ọ bụrụ na a ga-enwe esemokwu banyere iji kwesịrị ịmegharị ihe dị ezigbo mkpa nye onye ọzọ nke onyeisi oche weere na ọ dị mkpa karị, a ga-enwe nsogbu,” ka o kwuru.
Otu onye omeiwu ọzọ, onye so na ndị niile na-enwe ọganihu (APC) si n’ebe ndịda ọdịda anyanwụ kwuru, sị: “A ghaghị inwe ụzọ ndị ọzọ iji kwado ntuli aka karịa ịmelata ihe Mgbakọ Mba ahụ na-emefu maka ọrụ. Anyị niile maara mkpa ọrụ ndị ahụ dị. Ihe ka ọtụtụ n’ime ha bụ ihe ndị e kere eke na imefu na ha ga-emepụta ọrụ ma mee ka akụnụba anyị dị elu. ”
Na nyocha ha nyere ha n’izu gara aga, onyeisi oche ahụ gwara ndị na-eme iwu ka ha gbanwee akụkụ nke nde N578 maka ọrụ ha na-eme ka ha tinye “n’ime ego 2018 iji nweta ego maka ntuli aka.
N’akwụkwọ ozi onyeisi oche nke Senate Bukola Saraki gụrụ ndị isi na Tuesday, Buhari rịọrọ ka a gbanwee ọnụ ọgụgụ nke N228,854 ijeri ma ọ bụ gbanwee ka ha wee nwee ike inye ego nhoputa ndi ochichi na N64,749 ijeri oru di egwu nke ulo oru mpebipu.
Otú ọ dị, ọjụjụ ndị ahụ nọ na Mgbakọ Mba ahụ na-emegide, ọtụtụ n’ime ha atụwo egwu na ọ bụghị nanị iji mechie ọrụ ahụ kamakwa hụ na e gburu ha n’ụzọ ziri ezi.
Ha na-ekwu na ego maka nhoputa ndi ochichi kwesiri inwe mmetuta n’ebe ozo n’enweghi mmebi iwu ndi na emetuta aka n’oru ndi nhoputa. Ọtụtụ kwuru na ndị omempụ, ọ bụghị ndị isi oche, nwere ike ikpebi ihe a ga-eji na ntuli aka.
Ha kwadoro echiche ha na Nkebi nke 80 (4) nke iwu, nke na-ekwu na a gaghị ewepụ ego ọ bụla site na Ego Consolidated Revenue Fund ma ọ bụ ego ọ bụla ọzọ maka itinye ego, ma e wezụga n’ụdị Nchịkọta Mba. Dị ka ndị ọka iwu si kwuo, onyeisi oche ahụ na-eleghara ọrụ ahụ anya ma na-achọ ohere iji mebie ha.
Mgbakọ Mba ahụ ga-aga ogologo oge ezumike n’izu a ma ghara ịmaliteghachi ruo na njedebe nke ọnwa 2018, bụ mmepe nke a na-atụ anya ka ọ ga-atụle oge ịme ntuli aka.
Karịa nke a, mmefu ego nke 2018 nwere ike ịta ahụhụ na-egbughị egbu n’ihi mbubreyo mmejuputa.
N’adịghị ka afọ 2017 na-emefu atụmatụ mgbe Federal Ministry of Finance kwupụtara ozugbo maka ego maka mmejuputa ihe, The Guardian amụtala site na ebe ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na mbụ na Ụlọọrụ Budget nke Federation na 2018 na-ese onyinyo ihere.
Nke a bụ n’ihi na a manyere ndị isi na ndị isi mba ahụ ka ha laghachi na ntaneti iji rụgharịa ọrụ ma kwenye na ihe a kapịrị ọnụ nke mmefu ego tupu ị chọpụta ihe ga-akwụ ụgwọ.
N’ụlọ ọrụ ego, onye enyemaka nye onyeisi ndị isi ụlọ, bụ Ben Akabueze, gwara The Guardian na ọ bụrụ na amaghị aha ya: “Ọ (Akabueze) na ndị ọzọ kacha elu n’òtù akụ na ụba na-ekpochi ọnụ na nzukọ dị mkpa, na-agbalị ịhazi ihe na ndị òtù nke National Assembly na mmefu ego, iji mara ihe ndị a ga-akwụ ụgwọ. Amaghị m ihe ga-eme. Ma, a ga-ebu ụzọ gbanwee tupu agbapụta ọ bụla a ghaghị ime, iji zere imebi iwu. ”
O kwuru na mmeghari ego a na – agbaso iwu onyeisi oche ahụ maka Mgbakọ Mba ahụ iji nweta ego site na ebubo ndị a kwadoro na a ga – etinye ya n’ọrụ nakwa na ọ dị mkpa ịgagharị na ntinye ego ndị ọzọ na – agbachitere site na ministri, ngalaba na ụlọ ọrụ (MDAs).
Otu nnyocha na Federal Ministry of Finance na Thursday kwenyere na ọ dịghị ihe ọ bụla e mere ka ọ bụrụ ihe karịrị otu ọnwa mgbe Buhari kwadoro ego ahụ.
Minista ego Kemi Adeosun na Accountant General nke Federation Ahmed Idris weghaara oku akporo ha ka ha dokwuo anya n’okwu a.
Onye ọkachamara ọkachamara nke Adeosun na Nkwukọrịta, Oluyinka Akintunde, kwuru na Òtù Na-ahụ Maka Ụba Ego nke Mba (NEC), nzukọ kachasị elu nke ndụmọdụ akụ na ụba nke mba nke Vice Vice President Yemi Osinbajo na-achị, na-edozi okwu ahụ.
N’ijizi mmefu ego eme ihe, James Akpandem, onye ọkachamara pụrụ iche na Minista nke ego na atụmatụ National, Udoma Udo Udoma kwuru, sị: “Amaghị m ihe ị na-ekwu. Anyị niile maara na mgbe ị na-eme ntinye aka na ntinye ego n’ime ọnwa gara aga, Maazị President gwara ụwa dum na ndị nnọchiteanya Mgbakọ na-etinye ihe ndị ọzọ na-esiteghị na ndụmọdụ ndị isi ahụ nakwa na ọ ga-ede ha ka ha gbanwee ya. Nke a bụ ihe ọ mere naanị mgbe Nọọmenti Independent National Electoral Commission (INEC) wetara ego ya maka ntuli aka 2019. Naanị ịgwa ha ka ha nweta ego site na ụfọdụ n’ime ọrụ ndị ahụ iji mee maka arịrịọ nke INEC. Nke a ọ chọrọ ịmeghachi ego? “
Tags: assemblyelectionhothottestIsimbidoISIMBIDO POSTisimbido postsisimbido tvisimbidopostISIMBIDOPOSTSISIMBIDOTVLATESTnationalnewnewsNIGERIApoliticalPOLITICSpostpostssenateupdate